ဗြူရိုကရစေီ အား လလေ့ာသုံးသပျသူ မကျချဈဗေးဘာ (Max Weber) အကွောငျး မိတျဆကျ – Kyaw Zaw Oo's Blog
September 21, 2021 December 10, 2021 web_master
ဗျူရိုကရေစီ အား လေ့လာသုံးသပ်သူ မက်ခ်စ်ဗေးဘာ (Max Weber) အကြောင်း မိတ်ဆက်
ဗျူရိုကရေစီယန္တရား၏ အလုပ်လုပ်ပုံအား လေ့လာသုံးသပ်လျက် စာအုပ်များ အက်ဆေးများ အစောင်စောင် ရေးသားခဲ့သူ၊ ဗျူရိုကရေစီ ဟူသော စကားလုံးအား ပထမဦးဆုံးတွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲခဲ့သူ မက်ခ်စ်ဗေးဘာ (၁၈၆၄-၁၉၂၀) သည် ဂျာမန်လူမျိုး လူမှုရေးဗေဒပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒပညာရှင်၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ ၎င်းရေးသားခဲ့သော ဗျူရိုကရေစီယန္တရားဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဆောင်းပါးများ စာအုပ်များမှာ လူမှုရေးဗေဒ (sociology) လေ့လာသူများအတွက် ဖတ်ကိုဖတ်ရမည့် စာတမ်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။
လူမှုရေးဗေဒ (sociology) ဟူသည့် ဘာသာရပ်ကြီးတစ်ခုအား ကားလ်မာ့ခ်စ်၊ Emile Durkheim တို့နှင့် တန်းတူ ဖော်ထုတ်တည်ထောင်ပေးခဲ့သူ ဘာသာရပ်ဖခင်ကြီး တစ်ဦးအဖြစ် ၎င်းအား မှတ်ယူကြသည်။ ထိုဘာသာရပ်တွင် သူ၏ သဘောတရားပိုင်း ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့မှုများမှာ အဓိကအားဖြင့် သုံးရပ်ရှိသည် ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ (တစ်) လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စီးပွားရေး အလုံးအထည် (economy) အကြား ဆက်နွယ်မှုအား သုံးသပ်ဖော်မြူလာထုတ်ခြင်း၊ (နှစ်) လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အာဏာရရှိလာပုံနှင့် အာဏာကိုထိန်းထားရန် အားထုတ်ပုံတို့အား သုံးသပ်ခြင်း၊ (သုံး) ဗျုရိုကရေစီ ၏ “သံလှောင်ခြိုင့်” ခေါ် “သံမဏိစွပ်ခွံ” (shell as hard as steel) နှင့် ယင်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀များအား မည်ကဲ့သို့ သက်ရောက်ပုံဖော်သနည်း – ဆိုသည့် အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ငံတော် (the state) အား မက်ခ်စ်ဗေးဘာ က ဖွင့်ဆိုပုံ
● ဗေးဘာ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ နိုင်ငံတော် (the state) ဆိုသည်မှာ – “သတ်မှတ်နယ်မြေတစ်ခုအတွင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အား တရားဝင်အသုံးပြုမှုကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ခွင့်အား (အောင်မြင်စွာ) ရယူသွားသည့် လူ့အသိုက်အ၀န်း” –ahuman community that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force withinagiven territory – ဟု သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုသည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ၊ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ၊ အာဏာရှင်အစိုးရ စသည်အားဖြင့် ခွဲခြားပြောနေစရာမလိုဘဲ အလုံးစုံသော “နိုင်ငံတော်” တို့သည် ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု အောက်တွင် ခြုံငုံမိသည် ဟု ဗေးဘာ က သတ်မှတ်သည်။ နိုင်ငံတော်တို့သည် အုပ်ချုပ်ရသော လူဦးရေများလာသည့်အခါ ထိထိရောက်ရောက်အုပ်ချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားများကို တည်ဆောက် လည်ပတ်စေကြရသည်။
ဗျူရိုကရေစီ အား လေ့လာချက်
● ဗျူရိုကရေစီ အား အလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောရလျှင် – အရေးအကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်များကို (ရွေးကောက်ခံ မဟုတ်သော) နိုင်ငံတော်ခန့် အရာရှိများက ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ကြသည့် အစိုးရလက်တံ ယန္တရားများ – ဟု ဆိုနိုင်မည် ထင်ပါသည်။ ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားအား အစိုးရလုပ်ဆောင်ဖွယ်ရာများကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများတွင်သာ အများဆုံး အသုံးပြုကြသော်လည်း ကြီးမားသော စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားများ ရှိနေနိုင်သည်။ မက်ခ်စ်ဗေးဘာ က ဗျူရိုကရေစီ အား ဆွေးနွေးသည့်အခါ အစိုးရမဟုတ်သော ယန္တရားများကိုပါ ခြုံငုံမိအောင် တင်ပြဆွေးနွေးသည်ကို တွေ့ရသည်။
● ဗျူရိုကရေစီပုံစံ (မော်ဒယ်) အနည်းဆုံး သုံးမျိုးခန့်တို့ ရှိသည့်အနက် – မတ်ခ်စ်ဗေးဘာ တင်ပြသော ဗျူရိုကရေစီ အမျိုးအစားကို rational မော်ဒယ် (သို့မဟုတ်) ၀တ်ဘာရီယန် (Weberian) မော်ဒယ် ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဗျူရိုကရေစီများ၏ ကြံအင်လက္ခဏာ ခြောက်မျိုးကို ဗေးဘာ က ခွဲခြမ်းတင်ပြသည်။
◊ “A formal hierarchical structure” ။ ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားများတွင် အထက်အောက် ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ အထက်အဆင့်က အောက်အဆင့်ကို ထိန်းချုပ်သည်။ ဗဟိုအဆင့်က စီမံရေးဆွဲခြင်း နှင့် ဗဟိုအဆင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နှင့် ယင်းတို့ကို အောက်ခြေတွင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်အတွက် အထက်အောက် ဖွဲ့စည်းပုံသည် အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်သည်။
◊ “Rules-based management” ။ ထိန်းချုပ်မှုကို သက်ရောက်စေနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းသည် စည်းမျဉ်းများကို ချမှတ်အသုံးပြုသည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင် မည်ကဲ့သို့လုပ်ရမည် ဟူသော စည်းမျဉ်းတို့အားဖြင့် တသမတ်တည်းဖြစ်မှု (uniformity) နှင့် ကောင်းစွာချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု (coordination) တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အားလုံးသော အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား တရားဝင် စည်းမျဉ်းများအရ သတ်မှတ် လုပ်ဆောင်စေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ထိုစည်းမျဉ်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အတွက် အထက်အဆင့်များမှ ချမှတ်လိုက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် အဆင့်အဆင့် အထစ်အငေါ့မရှိ အောက်ခြေသို့ရောက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြသည်။
◊ “Functional specialty organization” ။ အဖွဲ့အစည်းများကို ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် သီးခြားခွဲခြား ဆောင်ရွက်စေသည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ အခွန်ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း စသည်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်း၏ အထူးကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် ခွဲခြားဆောင်ရွက်စေသကဲ့သို့ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးချင်းအလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု သီးခြားနယ်ပယ်များအလိုက် တာဝန်ထမ်းဆောင်စေသည်။
◊ “Up-focused or in-focused mission” ။ အဖွဲ့အစည်းအား လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းသော နိုင်ငံအစိုးရ သို့မဟုတ် အစုရှယ်ရာရှင်များ သို့မဟုတ် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ သို့မဟုတ် အပေါ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို တာဝန်ထမ်းဆောင်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်လျှင် up-focused mission ဖြစ်ပြီး မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းသက်သက် ကိုသော်လည်းကောင်း အဖွဲ့အစည်းဝင်များကိုသာလျှင်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာ ဖြစ်လျှင် in-focused mission ဖြစ်သည်။ တပြည်ထောင်စနစ်တွင် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအားလုံးလိုလို အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအားလုံးလိုလို တို့သည် up-focused အပေါ်သို့ တနည်းအားဖြင့် အစိုးရကို တာဝန်ခံရလေ့ရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံပျက်နေခြင်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှုလွန်ကဲနေခြင်း တို့ ဖြစ်လာပါက up-focused ဖြစ်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် in-focused ဆန်ဆန်ဖြစ်လာတတ်သည်။ self-serving ဖြစ်လာတတ်သည်။ စစ်တွေကန်တော်ကြီးမှ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်စွာ ရေပေးဝေနိုင်ရန်အတွက် ဘက်ဂျက် သိန်းထောင်ပေါင်းများစွာ အခါခါထည့်သော်လည်း ထည့်မျိုးထည့် မလောက် ဖြစ်လာသည်။
◊ “impersonal” ။ အဖွဲ့အစည်းက မိမိဝန်ထမ်းများကို ဆက်ဆံသည့်အခါ ခံစားရှေ့မထား ခွဲခြားမှုမပါ တူညီစွာဆက်ဆံသကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်းက ပြည်သူများကို (သို့မဟုတ် စားသုံးသူများကို) ဆက်ဆံသည့်အခါ တွင်လည်း ခံစားမှုရှေ့မထား ခွဲခြားမှုမပါ တူညီစွာဆက်ဆံသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် nepotism ခေါ် ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒ သို့မဟုတ် အပြင်လူများစွက်ဖက်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေး ၀င်စွက်မှု များမှ ကင်းလွတ်စေသည်။ I am just doing my job. တို့ – တာဝန်အရ ဖမ်းရတာပါ တို့ – စသည့် စသည့် စကားတို့သည် ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရား၏ သရုပ်သဏ္ဍာန်ကို ပေါ်လွင်စေသည့် စကားများ ဖြစ်ကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု အခြင်းအရာများ (rational factors) သက်သက်ကို အခြေခံ ဆုံးဖြတ်သည်၊ လူပုဂ္ဂိုလ် အခြင်းအရာများ (personal factors) ကို အခြေခံ ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြု။
◊ “Employment based on technical qualifications” ။ ဌာနအလိုက်၊ ရာထူးနေရာအလိုက် ခန့်အပ်ခြင်း ရာထူးတိုးခြင်းတို့တွင် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်ကို အခြေခံကာ လုပ်ဆောင်ရသည်။ ဆရာဝန်နေရာကို ဆရာဝန်ခန့်အပ်ရသည်။ အင်ဂျင်နီယာနေရာတွင် အင်ဂျင်နီယာခန့်ရသည်။
အုပ်ချုပ်သည့်အာဏာ၏ တရားဝင်မှု (legitimacy) သုံးမျိုး
● အုပ်ချုပ်သည့်အာဏာ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ခြင်း သဘော သုံးသည့်စကားလုံးကို ဗေးဘာ၏ မူရင်း ဂျာမန်ဘာသာ ရေးသားချက်များတွင် Herrschaft ဟု ရေးသားထားရာ ယင်းမှာ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် “lordhip” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ယင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်သူအချို့ authority ဟု ဘာသာပြန်လျက် အချို့က domination ဟု ဘာသာပြန်ကြလေသည်။
● မည်သည့်အုပ်ချုပ်သူမဆို မိမိတို့၏ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိမှုအတွက် ကောင်းမွန်ပြတ်သားသော ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်လေသည်။ ထိုရှင်းလင်းချက်ကို သာမန်အချိန်မျိုးတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ခံ လူအများက သာမန်အားဖြင့် ပြီးစလွယ်လက်ခံထားတတ်ကြလေ့ရှိသော်လည်း၊ တိုင်းပြည်၏ အကြပ်အတည်းကာလများတွင်မူကား အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိမှု (တစ်နည်း အုပ်ချုပ်သူ၏ တရားဝင်မှု/legitimacy) အား မေးခွန်းထုတ်တတ်ကြလေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် – လက်ရှိ အကျပ်အတည်းကာလတွင် စစ်တပ်ဦးဆောင်သော နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ (စကစ) ၏ တရားဝင်မှု/legitimacy ကို NUG ကငြင်းပယ်ပြီး NUG ၏ တရားဝင်မှုကို စကစ ဘက်မှ လက်စတုံး ငြင်းပယ်ချေမှုန်းရန် ကြိုးစားနေသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်လေသည်။
● မက်ခ်စ်ဗေးဘာ ၏ အဆိုအရ – အုပ်ချုပ်သည့်အာဏာ (domination or authority) ၏ တရားဝင်မှု (legitimacy) မှာ သုံးမျိုးအစင် ရှိသည် ဟု ဆိုလေသည်။ သုံးမျိုးအစင် ဆိုသည့်သဘောကား အရောအနှောအမျိုးအစားများ ရှိနေနိုင်သည် ဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုသုံးမျိုးအစင်တို့မှာ – (တစ်) Charisma ၊ (နှစ်) tradition နှင့် (သုံး) legality သို့မဟုတ် legal-rationality တို့ ဖြစ်ကြသည် ဟု ဆိုလေသည်။
● ပထမအမျိုးအစားတွင် charisma ခေါ် လူအများနှစ်လိုလက်ခံသော ထူးကဲခေါင်းဆောင် အရည်အသွေး များအား လူထုအားသိစေလျက် ထိုထူးကဲခေါင်းဆောင်၏ အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်ထွန်းစေခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဒုတိယအမျိုးအစား tradition ခေါ် ဓလေ့ထုံးတမ်း အရ အုပ်ချုပ်မှု တရားဝင်ခြင်းဟူသည်ကား ကာလကြာမြင့်စွာ မိမိတို့ လူအစုအဝေး၏ အလေ့အထ ကျင့်ထုံးဖြစ်နေသော သတ်မှတ်ချက်များအရ အုပ်ချုပ်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် – ဘုရင်စနစ် ဖြစ်လေသည်။ တတိယအမျိုးအစားမှာကား – သင့်လျော်သော ဥပဒေရေးရာ-ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု ဆိုင်ရာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှု (legal-rationality resoning) တို့အားဖြင့် တည်ဆောက်ရေးဆွဲသော – impersonal လူပုဂ္ဂိုလ်ကို အခြေမခံသည့် စည်းမျဉ်းများ universal အားလုံးနှင့်အကြုံးဝင်သည့် မူဝါဒတို့အားဖြင့် တည်ဆောက်အပ်သော အုပ်ချုပ်လွှမ်းမိုးမှု ဖြစ်သည် ဟု ဆိုလေသည်။
● Charisma ကို အခြေခံသည့် ပထမအမျိုးအစားတွင် ထူးကဲခေါင်းဆောင် သေလွန်သည့်အခါ ထိုအုပ်ချုပ်လွှမ်းမိုးမှုသည် ဆက်လက်မတည်တံ့ဘဲ ပြိုလဲတတ်သည် ဟု ဆိုလေသည်။ tradition ကို အခြေခံသည့် ဒုတိယအမျိုးအစား သည်ကား လူတို့သည် rationality ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် လုပ်ဆောင်မှုများကို ပိုမို လုပ်ဆောင်သထက် လုပ်ဆောင်လာကြပြီး ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို စွန့်ပယ်သထက် စွန့်ပယ်လာကြ သည်နှင့်အမျှ လဲပြိုကျ တတ်ကြလေသည် ဟု ဆိုသည်။
[လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံရေးမှတ်စုတိုများ (၂၂)]
[ Unicode hee ]
ဗြူရိုကရစေီယန်တရား၏ အလုပျလုပျပုံအား လလေ့ာသုံးသပျလကျြ စာအုပျမြား အကျဆေးမြား အစောငျစောငျ ရေးသားခဲ့သူ၊ ဗြူရိုကရစေီ ဟူသော စကားလုံးအား ပထမဦးဆုံးတှငျတှငျကယျြကယျြ သုံးစှဲခဲ့သူ မကျချဈဗေးဘာ (၁၈၆၄-၁၉၂၀) သညျ ဂြာမနျလူမြိုး လူမှုရေးဗဒေပညာရှငျ၊ နိုငျငံရေးဘောဂဗဒေပညာရှငျ၊ အတှေးအချေါပညာရှငျ တဈဦးဖွဈလသေညျ။ ၎င်းငျးရေးသားခဲ့သော ဗြူရိုကရစေီယန်တရားဆိုငျရာ ပညာရပျဆောငျးပါးမြား စာအုပျမြားမှာ လူမှုရေးဗဒေ (sociology) လလေ့ာသူမြားအတှကျ ဖတျကိုဖတျရမညျ့ စာတမျးမြား ဖွဈကွပါသညျ။
လူမှုရေးဗဒေ (sociology) ဟူသညျ့ ဘာသာရပျကွီးတဈခုအား ကားလျမာ့ချဈ၊ Emile Durkheim တို့နှငျ့ တနျးတူ ဖျောထုတျတညျထောငျပေးခဲ့သူ ဘာသာရပျဖခငျကွီး တဈဦးအဖွဈ ၎င်းငျးအား မှတျယူကွသညျ။ ထိုဘာသာရပျတှငျ သူ၏ သဘောတရားပိုငျး ဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့မှုမြားမှာ အဓိကအားဖွငျ့ သုံးရပျရှိသညျ ဟု သတျမှတျကွသညျ။ (တဈ) လူ့အဖှဲ့အစညျး၏ ယဉျကြေးမှုနှငျ့ စီးပှားရေး အလုံးအထညျ (economy) အကွား ဆကျနှယျမှုအား သုံးသပျဖျောမွူလာထုတျခွငျး၊ (နှဈ) လူပုဂ်ဂိုလျမြား နှငျ့ အဖှဲ့အစညျးမြား အာဏာရရှိလာပုံနှငျ့ အာဏာကိုထိနျးထားရနျ အားထုတျပုံတို့အား သုံးသပျခွငျး၊ (သုံး) ဗြုရိုကရစေီ ၏ “သံလှောငျခွိုငျ့” ချေါ “သံမဏိစှပျခှံ” (shell as hard as steel) နှငျ့ ယငျးက ကြှနျုပျတို့၏ဘ၀မြားအား မညျကဲ့သို့ သကျရောကျပုံဖျောသနညျး – ဆိုသညျ့ အကွောငျးအရာမြား ဖွဈကွသညျ။
နိုငျငံတျော (the state) အား မကျချဈဗေးဘာ က ဖှငျ့ဆိုပုံ
● ဗေးဘာ၏ သတျမှတျခကျြအရ နိုငျငံတျော (the state) ဆိုသညျမှာ – “သတျမှတျနယျမွတေဈခုအတှငျး ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအငျအား တရားဝငျအသုံးပွုမှုကို လကျဝါးကွီးအုပျခှငျ့အား (အောငျမွငျစှာ) ရယူသှားသညျ့ လူ့အသိုကျအ၀နျး” –ahuman community that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force withinagiven territory – ဟု သတျမှတျဖှငျ့ဆိုသညျ။ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံ၊ ဒီမိုကရစေီအစိုးရ၊ အာဏာရှငျအစိုးရ စသညျအားဖွငျ့ ခှဲခွားပွောနစေရာမလိုဘဲ အလုံးစုံသော “နိုငျငံတျော” တို့သညျ ဤအဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုမှု အောကျတှငျ ခွုံငုံမိသညျ ဟု ဗေးဘာ က သတျမှတျသညျ။ နိုငျငံတျောတို့သညျ အုပျခြုပျရသော လူဦးရမြေားလာသညျ့အခါ ထိထိရောကျရောကျအုပျခြုပျနိုငျရနျအတှကျ ဗြူရိုကရစေီ ယန်တရားမြားကို တညျဆောကျ လညျပတျစကွေရသညျ။
ဗြူရိုကရစေီ အား လလေ့ာခကျြ
● ဗြူရိုကရစေီ အား အလှယျဆုံးနားလညျအောငျပွောရလြှငျ – အရေးအကွီးဆုံး ဆုံးဖွတျခကျြမြားကို (ရှေးကောကျခံ မဟုတျသော) နိုငျငံတျောခနျ့ အရာရှိမြားက ဆုံးဖွတျလုပျကိုငျကွသညျ့ အစိုးရလကျတံ ယန်တရားမြား – ဟု ဆိုနိုငျမညျ ထငျပါသညျ။ ဗြူရိုကရစေီ ယန်တရားအား အစိုးရလုပျဆောငျဖှယျရာမြားကို အကောငျအထညျဖျောသညျ့ လကျအောကျခံအဖှဲ့အစညျးမြားတှငျသာ အမြားဆုံး အသုံးပွုကွသျောလညျး ကွီးမားသော စီးပှားရေး အဖှဲ့အစညျးမြား နှငျ့ နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးမြားတှငျလညျး ဗြူရိုကရစေီ ယန်တရားမြား ရှိနနေိုငျသညျ။ မကျချဈဗေးဘာ က ဗြူရိုကရစေီ အား ဆှေးနှေးသညျ့အခါ အစိုးရမဟုတျသော ယန်တရားမြားကိုပါ ခွုံငုံမိအောငျ တငျပွဆှေးနှေးသညျကို တှရေ့သညျ။
● ဗြူရိုကရစေီပုံစံ (မျောဒယျ) အနညျးဆုံး သုံးမြိုးခနျ့တို့ ရှိသညျ့အနကျ – မတျချဈဗေးဘာ တငျပွသော ဗြူရိုကရစေီ အမြိုးအစားကို rational မျောဒယျ (သို့မဟုတျ) ၀တျဘာရီယနျ (Weberian) မျောဒယျ ဟု ချေါကွသညျ။ ဗြူရိုကရစေီမြား၏ ကွံအငျလက်ခဏာ ခွောကျမြိုးကို ဗေးဘာ က ခှဲခွမျးတငျပွသညျ။
◊ “A formal hierarchical structure” ။ ဗြူရိုကရစေီ ယန်တရားမြားတှငျ အထကျအောကျ ဖှဲ့စညျးပုံရှိသညျ။ အထကျအဆငျ့က အောကျအဆငျ့ကို ထိနျးခြုပျသညျ။ ဗဟိုအဆငျ့က စီမံရေးဆှဲခွငျး နှငျ့ ဗဟိုအဆငျ့ ဆုံးဖွတျခကျြမြားခမြှတျခွငျးတို့ လုပျဆောငျနိုငျရနျ နှငျ့ ယငျးတို့ကို အောကျခွတှေငျ အကောငျအထညျ ဖျောနိုငျရနျအတှကျ အထကျအောကျ ဖှဲ့စညျးပုံသညျ အခွခေံအုတျမွဈ ဖွဈသညျ။
◊ “Rules-based management” ။ ထိနျးခြုပျမှုကို သကျရောကျစနေိုငျရနျအတှကျ အဖှဲ့အစညျးသညျ စညျးမဉျြးမြားကို ခမြှတျအသုံးပွုသညျ။ မညျသညျ့အခွအေနတှေငျ မညျကဲ့သို့လုပျရမညျ ဟူသော စညျးမဉျြးတို့အားဖွငျ့ တသမတျတညျးဖွဈမှု (uniformity) နှငျ့ ကောငျးစှာခြိတျဆကျလုပျဆောငျမှု (coordination) တို့ကို ဖွဈပျေါစသေညျ။ အားလုံးသော အုပျခြုပျရေးဆိုငျရာ လုပျငနျးစဉျမြားအား တရားဝငျ စညျးမဉျြးမြားအရ သတျမှတျ လုပျဆောငျစခွေငျး ဖွဈသညျ။ ဤနညျးအားဖွငျ့ ထိုစညျးမဉျြးမြားနှငျ့ခြိတျဆကျထားသညျ့အတှကျ အထကျအဆငျ့မြားမှ ခမြှတျလိုကျသော ဆုံးဖွတျခကျြမြားသညျ အဆငျ့အဆငျ့ အထဈအငေါ့မရှိ အောကျခွသေို့ရောကျရှိ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျကွသညျ။
◊ “Functional specialty organization” ။ အဖှဲ့အစညျးမြားကို ကြှမျးကငျြမှုအလိုကျ သီးခွားခှဲခွား ဆောငျရှကျစသေညျ။ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေး လုပျငနျး၊ အခှနျကောကျခံခွငျးလုပျငနျး စသညျဖွငျ့ အဖှဲ့အစညျး၏ အထူးကြှမျးကငျြမှုအလိုကျ ခှဲခွားဆောငျရှကျစသေကဲ့သို့ ၀နျထမျးတဈဦးခငျြးအလိုကျ ကြှမျးကငျြမှု သီးခွားနယျပယျမြားအလိုကျ တာဝနျထမျးဆောငျစသေညျ။
◊ “Up-focused or in-focused mission” ။ အဖှဲ့အစညျးအား လုပျပိုငျခှငျ့အပျနှငျးသော နိုငျငံအစိုးရ သို့မဟုတျ အစုရှယျရာရှငျမြား သို့မဟုတျ ဘုတျအဖှဲ့ဝငျမြား သို့မဟုတျ အပျေါအာဏာပိုငျအဖှဲ့တဈဖှဲ့ကို တာဝနျထမျးဆောငျသော လုပျငနျးဆောငျတာဖွဈလြှငျ up-focused mission ဖွဈပွီး မိမိတို့အဖှဲ့အစညျးသကျသကျ ကိုသျောလညျးကောငျး အဖှဲ့အစညျးဝငျမြားကိုသာလြှငျလညျးကောငျး တာဝနျထမျးဆောငျသော လုပျငနျးဆောငျတာ ဖွဈလြှငျ in-focused mission ဖွဈသညျ။ တပွညျထောငျစနဈတှငျ ပွညျသူ့ဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးအားလုံးလိုလို အစိုးရ ဌာနဆိုငျရာလုပျငနျးအားလုံးလိုလို တို့သညျ up-focused အပျေါသို့ တနညျးအားဖွငျ့ အစိုးရကို တာဝနျခံရလရှေိ့သညျ။ ဖှဲ့စညျးပုံပကျြနခွေငျး အကငျြ့ပကျြခွစားမှုလှနျကဲနခွေငျး တို့ ဖွဈလာပါက up-focused ဖွဈရမညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားသညျ in-focused ဆနျဆနျဖွဈလာတတျသညျ။ self-serving ဖွဈလာတတျသညျ။ စဈတှကေနျတျောကွီးမှ တဈနှဈပတျလုံး လုံလောကျစှာ ရပေေးဝနေိုငျရနျအတှကျ ဘကျဂကျြ သိနျးထောငျပေါငျးမြားစှာ အခါခါထညျ့သျောလညျး ထညျ့မြိုးထညျ့ မလောကျ ဖွဈလာသညျ။
◊ “impersonal” ။ အဖှဲ့အစညျးက မိမိဝနျထမျးမြားကို ဆကျဆံသညျ့အခါ ခံစားရှမေ့ထား ခှဲခွားမှုမပါ တူညီစှာဆကျဆံသကဲ့သို့ အဖှဲ့အစညျးက ပွညျသူမြားကို (သို့မဟုတျ စားသုံးသူမြားကို) ဆကျဆံသညျ့အခါ တှငျလညျး ခံစားမှုရှမေ့ထား ခှဲခွားမှုမပါ တူညီစှာဆကျဆံသညျ။ ဤနညျးအားဖွငျ့ nepotism ချေါ ဆှမြေိုးကောငျးစားရေးဝါဒ သို့မဟုတျ အပွငျလူမြားစှကျဖကျမှု သို့မဟုတျ နိုငျငံရေး ၀ငျစှကျမှု မြားမှ ကငျးလှတျစသေညျ။ I am just doing my job. တို့ – တာဝနျအရ ဖမျးရတာပါ တို့ – စသညျ့ စသညျ့ စကားတို့သညျ ဗြူရိုကရစေီ ယန်တရား၏ သရုပျသဏ်ဍာနျကို ပျေါလှငျစသေညျ့ စကားမြား ဖွဈကွသညျ။ ဆုံးဖွတျခကျြမြားကို ကြိုးကွောငျးဆီလြျောမှု အခွငျးအရာမြား (rational factors) သကျသကျကို အခွခေံ ဆုံးဖွတျသညျ၊ လူပုဂ်ဂိုလျ အခွငျးအရာမြား (personal factors) ကို အခွခေံ ဆုံးဖွတျခွငျးမပွု။
◊ “Employment based on technical qualifications” ။ ဌာနအလိုကျ၊ ရာထူးနရောအလိုကျ ခနျ့အပျခွငျး ရာထူးတိုးခွငျးတို့တှငျ သကျဆိုငျရာကြှမျးကငျြမှုနယျပယျကို အခွခေံကာ လုပျဆောငျရသညျ။ ဆရာဝနျနရောကို ဆရာဝနျခနျ့အပျရသညျ။ အငျဂငျြနီယာနရောတှငျ အငျဂငျြနီယာခနျ့ရသညျ။
အုပျခြုပျသညျ့အာဏာ၏ တရားဝငျမှု (legitimacy) သုံးမြိုး
● အုပျခြုပျသညျ့အာဏာ သို့မဟုတျ အုပျခြုပျခွငျး သဘော သုံးသညျ့စကားလုံးကို ဗေးဘာ၏ မူရငျး ဂြာမနျဘာသာ ရေးသားခကျြမြားတှငျ Herrschaft ဟု ရေးသားထားရာ ယငျးမှာ တိုကျရိုကျအဓိပ်ပါယျအားဖွငျ့ “lordhip” ဟု အဓိပ်ပါယျရပွီး ယငျးကို အင်ျဂလိပျဘာသာပွနျသူအခြို့ authority ဟု ဘာသာပွနျလကျြ အခြို့က domination ဟု ဘာသာပွနျကွလသေညျ။
● မညျသညျ့အုပျခြုပျသူမဆို မိမိတို့၏ အုပျခြုပျခှငျ့ရှိမှုအတှကျ ကောငျးမှနျပွတျသားသော ရှငျးလငျးခကျြလိုအပျလသေညျ။ ထိုရှငျးလငျးခကျြကို သာမနျအခြိနျမြိုးတှငျ ယဘေုယအြားဖွငျ့ အုပျခြုပျခံ လူအမြားက သာမနျအားဖွငျ့ ပွီးစလှယျလကျခံထားတတျကွလရှေိ့သျောလညျး၊ တိုငျးပွညျ၏ အကွပျအတညျးကာလမြားတှငျမူကား အုပျခြုပျခှငျ့ရှိမှု (တဈနညျး အုပျခြုပျသူ၏ တရားဝငျမှု/legitimacy) အား မေးခှနျးထုတျတတျကွလသေညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ – လကျရှိ အကပျြအတညျးကာလတှငျ စဈတပျဦးဆောငျသော နိုငျငံတျောအုပျခြုပျရေးကောငျစီ (စကစ) ၏ တရားဝငျမှု/legitimacy ကို NUG ကငွငျးပယျပွီး NUG ၏ တရားဝငျမှုကို စကစ ဘကျမှ လကျစတုံး ငွငျးပယျခမြှေုနျးရနျ ကွိုးစားနသေညျကို တှရေ့မညျ ဖွဈလသေညျ။
● မကျချဈဗေးဘာ ၏ အဆိုအရ – အုပျခြုပျသညျ့အာဏာ (domination or authority) ၏ တရားဝငျမှု (legitimacy) မှာ သုံးမြိုးအစငျ ရှိသညျ ဟု ဆိုလသေညျ။ သုံးမြိုးအစငျ ဆိုသညျ့သဘောကား အရောအနှောအမြိုးအစားမြား ရှိနနေိုငျသညျ ဟု ဆိုလိုသညျ။ ထိုသုံးမြိုးအစငျတို့မှာ – (တဈ) Charisma ၊ (နှဈ) tradition နှငျ့ (သုံး) legality သို့မဟုတျ legal-rationality တို့ ဖွဈကွသညျ ဟု ဆိုလသေညျ။
● ပထမအမြိုးအစားတှငျ charisma ချေါ လူအမြားနှဈလိုလကျခံသော ထူးကဲခေါငျးဆောငျ အရညျအသှေး မြားအား လူထုအားသိစလေကျြ ထိုထူးကဲခေါငျးဆောငျ၏ အုပျခြုပျမှုဖွဈထှနျးစခွေငျးဖွဈလသေညျ။ ဒုတိယအမြိုးအစား tradition ချေါ ဓလထေုံ့းတမျး အရ အုပျခြုပျမှု တရားဝငျခွငျးဟူသညျကား ကာလကွာမွငျ့စှာ မိမိတို့ လူအစုအဝေး၏ အလအေ့ထ ကငျြ့ထုံးဖွဈနသေော သတျမှတျခကျြမြားအရ အုပျခြုပျခွငျး ဖွဈလသေညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ – ဘုရငျစနဈ ဖွဈလသေညျ။ တတိယအမြိုးအစားမှာကား – သငျ့လြျောသော ဥပဒရေေးရာ-ကြိုးကွောငျးဆီလြျောမှု ဆိုငျရာ ဆငျခွငျသုံးသပျမှု (legal-rationality resoning) တို့အားဖွငျ့ တညျဆောကျရေးဆှဲသော – impersonal လူပုဂ်ဂိုလျကို အခွမေခံသညျ့ စညျးမဉျြးမြား universal အားလုံးနှငျ့အကွုံးဝငျသညျ့ မူဝါဒတို့အားဖွငျ့ တညျဆောကျအပျသော အုပျခြုပျလှမျးမိုးမှု ဖွဈသညျ ဟု ဆိုလသေညျ။
● Charisma ကို အခွခေံသညျ့ ပထမအမြိုးအစားတှငျ ထူးကဲခေါငျးဆောငျ သလှေနျသညျ့အခါ ထိုအုပျခြုပျလှမျးမိုးမှုသညျ ဆကျလကျမတညျတံ့ဘဲ ပွိုလဲတတျသညျ ဟု ဆိုလသေညျ။ tradition ကို အခွခေံသညျ့ ဒုတိယအမြိုးအစား သညျကား လူတို့သညျ rationality ကြိုးကွောငျးဆငျခွငျ လုပျဆောငျမှုမြားကို ပိုမို လုပျဆောငျသထကျ လုပျဆောငျလာကွပွီး ဓလထေုံ့းတမျးမြားကို စှနျ့ပယျသထကျ စှနျ့ပယျလာကွ သညျနှငျ့အမြှ လဲပွိုကြ တတျကွလသေညျ ဟု ဆိုသညျ။
[လူငယျမြားအတှကျ နိုငျငံရေးမှတျစုတိုမြား (၂၂)]
Previous အစ်စရေးမှတျစု(၂)။ “အရေးဆိုသမားမြားအတှကျ လကျစှဲမြား ရေးသားသူ Frank Luntz”
Next “လိုအပျခကျြအရ” ဟု အကွောငျးပွတတျသညျ့ လကျတှနေို့ငျငံရေးဝါဒ (Realpolitik)